သွယ်သွယ် – Hlataw.com
“ဘယျက ပွနျလာတာလဲ မိုးငယျ” “ဈေးက အမရေ ဆပျပွာ၊ သှားတိုကျဆေး၊ အမှေးရတှေေ သှားဝယျတာ အမရေ ညနစေောငျးနပွေီ ဆိုပမေယျ့ တျောတျောပူတယျအမရယျ” “ဟုတျတယျ ပူလာပွီ မိုးငယျရေ အပွငျထှကျရငျ ထီးယူသှားမှပါကှယျ” ဘေးအခနျးက အမကွီးကိုပွောရငျး မိုးငယျ တိုကျခနျးတံခါးသော့ဖှငျ့ကာ ဝငျလိုကျလသေညျ။ သိန်းအေး၏ လီးကြီးက ထိပ်ဖူးကြီးနီရဲပြောင်တင်းကာ အရည်ကြည်များပေကျံနေသဖြင့် စိုစွတ်ချောမွေ့နေသည်။ ထိုကြောင့် သွယ်သွယ်၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားသို့ အလွယ်တကူ ‘ ပြစ် ’ ကနဲ ထိုးဝင်သွားသည်။ သွယ်သွယ်၏ ဖင်ကားကားကြီးက တစ်ချက်တွန့်ကနဲဖြစ်သွားရင်း စောက်ဖုတ်ကြီးက တင်းကနဲ ခုံးထလာသည်။ သွယ်သွယ် ခေါင်းလေး တစ်ချက်ခါယမ်းလိုက်သည်။ “ အ….အား….” “ သိပ်နာနေလား….” “ အင်း….ဟင်း…” မနေ့ညကမှစပြီးခံဖူးသည့် စောက်ပတ်က အခုဒုတိယညရောက်လာပေမယ့် လိုးပြီးရင်း လိုးရင်းလုပ်နေတာကြောင့် နာကျင်ကျိန်းစပ်နေသည်။ “ ဒါဆို မနက်မှဆက်လုပ်မယ်လေ….” “ ဟင့်အင်း….ဝင်နေပြီပဲကွာ….ဖြေးဖြေးလုပ်….နောက်မှကြမ်းချင်ကြမ်းပေါ့….” အားအင်ချိနဲ့သော သွယ်သွယ်၏ လေသံလေးက အိမ်ထောင်ဦး ဒုတိယည၏ ဂီတသံစဉ်လေး ဖြစ်နေသည်။ အထဲ ကို တစ်ချောင်းလုံးဝင်နေပြီ။ အရည်ကြည်တွေက ရွှဲကနဲ ရွှဲကနဲ ထွက်လာနေသည်။ စောက်ဖုတ်အုံတစ်ခုလုံး၏ အပြင်ဖက် ရော အတွင်းဖက်မှာပါရှိသည့် ကြွက်သားတွေ အသားစိုင်တွေက တဖြေးဖြေး မာကျစ်ကာ ဖောင်းထလာကြပြီ။ ဒီအခြေအနေ တွင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရပ်လိုက်လို့ဖြစ်မလဲ။ သွယ်သွယ်မှာ ဒီအချိန်တွင် အလိုးရပ်လိုက်မည့်ဒဏ်ကို မခံနိုင်ပါ။ “ သွယ် သိပ်နာနေမှာစိုးလို့ပါ….” “ လုပ်မှာလုပ်ကွာ စကားပြောမနေနဲ့….” စောက်ခေါင်းထဲတွင် ငြိမ်၍စိမ်ထားသော လီးချောင်းပူပူမာမာကြီးကို အမြန်ဆုံးပြန်၍ လှုပ်ရှားစေချင်နေသည်။ တင်း နေသော ဖင်ကြီးမှာ ဝင်း၍ဖွေးနေသည်။ ထိုဖင်ကြီးနှစ်ခြမ်းကြားမှ ပြူးပြီးထွက်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ယောက်ျားလက် ခုပ်တစ်ခုစာမျှ ဖူးထွက်နေသည်။ ခါးလေးကို စုံကိုင်၍ လီးကို တစ်ချက်ချင်း ဆွဲဆွဲနှုတ်ကာ လိုးပေးသည်။ သွယ်သွယ် နာသေးလား….” “ တဖြေးဖြေးပျောက်လာပြီ….လုပ်….အကို့ သဘောကျသာလုပ်တော့….” “ ဗြွတ်….ပြွတ်…စွပ်….ဖွတ်….” “ အင့်….အမလေး….လေး…အကိုရယ်….” သွယ်သွယ်၏ ဖင်ကြီးရှေ့တိုးနောက်ငင်နှင့် လုပ်ပေးလာသည်။
အရည်ကြည်လေးတွေက ပထမချော်ချွတ်ချောမော နေရာမှ အထဲတွင် တဖြေးဖြေးစေးထန်းလာသည်။ နှစ်ယောက်စလုံး အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်မိနေကြသည်။ လင်မယားညားတာမှ ခြောက်လမပြည့်သေး။ သိန်းအေးက အလုပ်ဖြင့် နယ်သို့ဆင်းသွားသည်။ သိန်းအေး အလုပ် က အဆောက်အဦး ဆေးသုတ်သည့် ကန်ထရိုက်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့် အတူတွဲလုပ်သည်။ နယ်တွင် တိုက်သုံးလုံး လက်ခံထားသည်။ အဆောက်အဦးအပြင်ဘန်းသာမက အတွင်းဖက်နံရံကြမ်းခင်း၊ အခန်းစီး မျက်နှာကျက်တွေပါ တစ်တိုက် လုံး လက်ခံထားတော့ အနည်းဆုံး ခြောက်လလောက်ကြာမည်။ ဒီတော့ သွယ်သွယ် တစ်ယောက်ထဲ အိမ်တွင်နေ၍ မဖြစ် တော့။ အမဖြစ်သူတို့ အိမ်သို့ပြောင်း၍နေခဲ့ရသည်။ သွယ်သွယ်၏ အမ နွယ်နွယ်က သာကေတ (၇) ရပ်ကွက်ထဲတွင်နေသည်။ သူ့ယောက်ျား ကိုစိုးက လိုင်းကားဒရိုက်ဘာ။ သားသမီးမရှိတော့ ဆယ်ပေအိမ်လေး တစ်လုံးကို အပိုင်ဝယ်၍နေနိုင်ခဲ့သည်။ အရင်က သွယ်သွယ်မှာ အမဖြစ်သူနှင့် အတူနေခဲ့ရာမှ သိန်းအေးနှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး အိမ်ခွဲဆင်းသွားတာဖြစ်သည်။ ဒီတော့ ပတ်ဝန်းကျင်းက သွယ်သွယ်အဖို့ စိမ်းမနေပါ။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ သွယ်သွယ် နေပျော်ပါ သည်။ ဒါပေမယ့် အိပ်ယာဝင်ချိန်တွင်တော့ လင်ဖြစ်သူကို သတိရလှသည်။ ဟိုတုန်းက အကြောင်းတွေကို ပြန်တွေးပြီး သတိရနေတတ်သည်။ သွယ်သွယ် စိတ်ကူးယဉ်တွေးတောမိနေတာက မဆုံးသေး။ အခန်းထဲမှ အမဖြစ်သူတို့လင်မယား၏ အသံက သဲ့သဲ့ထွက်၍လာသည်။အင့်….အင့်….အင့်….အင့်…” အိမ်လေးက ငြိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲခါယမ်း၍ တကျွီကျွီမြည်နေသည်။ “ ဖြေးဖြေးပါဆို ကိုစိုးကလဲ….” “ ဖြေးဖြေးလုပ်ရတာ အားမရဘူးဟ….” “ အပြင်ဖက်မှာ သွယ်သွယ်ရှိတယ်….” “ သူလည်း အိမ်ထောင်ကျနေပြီပဲကွာ….သူအပျိုတုန်းက ငါအသံမမြည်အောင် ကြိတ်လုပ်ခဲ့တာပဲ….ခုတော့ မတားပါနဲ့ကွာ….”နွယ်နွယ်နှင့် ကိုစိုးတို့ အသံက ခပ်အုပ်အုပ်ပြောနေသော်လည်း သွယ်သွယ်မှာ သူတို့အသံတွေကို သဲသဲကွဲကွဲကြား နေရသည်။
သွယ်သွယ် သက်ပြင်းလေးတစ်ချက်ချ၍ ထဘီလေးကို ဆွဲလှန်ကာ လက်ကလေးတစ်ဖက်က အရည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်နေသော စောက်ဖုတ်လေးကို ရွရွလေး ပွတ်ပေးနေမိသည်။ စိတ်ထဲတွင် ဝမ်းနည်းသလိုလည်း ခံစားနေရသည်။ “ အင်း….ဟင်း….အင့်…ဟင်း….ဟင်း….ကောင်းလိုက်တာ ကိုစိုးရယ်….ဟင်း….ဟင်း….” မအောင့်နိုင် မအီးနိုင်ဘဲ ညီးတွားလိုက်သော အမဖြစ်သူ နွယ်နွယ်၏ ညီးတွားသံ နောက်ဆုံးစကားရပ်က သွယ်သွယ် ကို အိပ်ယာထဲမှ ငေါက်ကနဲ ထထိုင်သွားစေသည်။ တဆက်ထဲ သွယ်သွယ် ခြင်ထောင်ကို မ၍ ထွက်လိုက်သည်။ အိမ်က ဆယ်ပေအိမ်ဖြစ်ပြီး အိမ်ရှေ့ခန်းနှင့် အတွင်းဖက်ကို ဝါးထရံခြား၍ကာထားသလို နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်နှင့်လည်း ဝါးထရံခြား ၍ ကာထားသည်။ သွယ်သွယ် အိပ်တာက မီးဖိုချောင်ခေါင်းရင်းပိုင်းဖက်တွင်ဖြစ်သည်။ ခြေရင်းဖက်တွင် ဝင်ပေါက်ထွက် ပေါက်တစ်ခုရှိ၍ ထိုဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်၏ အပြင်ဖက်တွင် ငါးပေပတ်လည်ခန့် အဖီလေးထိုး၍ မီးဖိုရှိသည်။ ခြင်ထောင်ထဲမှ ထွက်လာပြီးသည်နှင့် သွယ်သွယ်မှာ မီးဖိုချောင်နှင့်အတွင်းဖက် ပိုင်းခြားကာထားသော ထရံနားသို့ ကပ်၍ တစ်ဖက်သို့ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ အိမ်ရှေ့ခန်းတွင်ထွန်းထားသော နှစ်ပေမီးချောင်း၏ အလင်းရောင်က သူမ၏အမ နွယ်နွယ်တို့ အိပ် ခန်းထဲသို့ လင်းလင်းချင်းချင်း ဝင်ရောက်လျက်ရှိသည်။ မြင်လိုက်ရသူ သွယ်သွယ်သည် သွေးသားတွေ သောင်းကျန်းနေသည့်အကြားကပင် မျက်စိရှက်သွားသည်။ ကိုစိုးရော နွယ်နွယ်ပါ နှစ်ယောက်စလုံးတွင် အဝတ်အစားမရှိကြပေ။ နွယ်နွယ်က အိပ်ယာပေါ်တွင် ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို ပြားနေအောင်ဝပ်၍ ဖင်ပူးတောင်းထောင်ပေးထားပြီး ကိုစိုးက နောက်မှနေ၍ သူမ၏ ဖင်သားကြီးနှစ်ခုကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုပ်ကိုင်ကာ ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေသည်။ နောက် သို့စူထွက်နေသော စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲသို့ လီးကြီးအရည်တရွှဲရွှဲဖြင့် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေသောနေရာကို အသေအချာကြည့်လိုက်မိရင်း သွယ်သွယ် အသက်အောင့်လိုက်မိကာ တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးဖြန်းကနဲထသွားမိသည်။ အိမ် ထောင်သည်ဘဝရောက်လို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အလိုးခံခဲ့ရပေမယ့် ဒီလိုယောက်ျားနှင့် မိန်းမ ပယ်ပယ်နယ်နယ်လိုးနေကြတာမျိုး ကို သွယ်သွယ် တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးခဲ့ပေ။ အမြင်ဆန်းသလောက် ကာမမီးရှိန်ကလည်း ငယ်ထိပ်ထိရောက်လာသည်။ ဒူး ထောက်၍ ထိုင်လိုက်ကာ သွယ်သွယ်သည် ပေါင်နှစ်လုံးကို ချဲလိုက်ပြီး ထဘီကို လှန်တင်ကာ သူမ၏ လက်ကလေးက စောက်ပတ်ပေါ်သို့ပြန်၍ရောက်သွားပြန်သည်။
ဆောင့်စမ်းပါ…..လုပ်စမ်းပါ….ကိုစိုးရယ်….နာနာလေး….အင်း….ဟင်း…ဟင်း …အင်း….” စောစောက ဖြေးဖြေးလုပ်ပါဆိုခဲ့သော နွယ်နွယ်မှာ အခုပွဲကြမ်းလာပြီ။ ကိုစိုးကလည်း အကြိုက်တွေ့သွားသည်။ တင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကိုကိုင်ထားသော သူ၏ လက်နှစ်ဖက်က နွယ်နွယ်၏ ခါးပေါ်ရောက်သွားပြီး ခါးလေးကို သေသေချာချာ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ညှပ်ကိုင်ကာ သူ၏လီးချောင်းကြီးကို တဆုံးနီးပါး ထုတ်ထုတ်ပြီး အားရပါးရ ဆောင့်တော့သည်။ အင်း….ဟင်း….ကောင်းလိုက်တာ ကိုစိုးရယ်….ဟင်း….ဟင်း….ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိဘူး….ဟင်း….ဟင်း….. ဟင်း….” တမိုက်လောက်ရှိသော လီးတန်တုတ်တုတ်မဲမဲကြီးက အလိုးခံနေသော အမဖြစ်သူ နွယ်နွယ်၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ အားရပါးရလိုးဆောင့်ရင်း သူမ၏ သွေးသားတွေကိုသာ ထိုးဆွနေတာမဟုတ်။ ကြည့်နေသော သွယ်သွယ်၏ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ သွေးသားတွေကိုလည်း အပြင်းအထန် ထိုးဆွနေလေသည်။ အရည်ကြည်တွေ ဆက်တိုက်ထွက်နေသော စောက်ခေါင်းဝသို့ သွယ်သွယ်၏ လက်ချောင်းလေးထိုးသွင်းမည်ပြုပြီးမှ သွယ်သွယ်၏ အကြည့်က မီးဖိုချောင်ခြေရင်းဖက်သို့ ရောက်သွားသည်။ ညနေဈေးမှ သူမကိုယ်တိုင်ဝယ်ခဲ့သည့် ခရမ်းသီးများကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သွယ်သွယ် တစ်ဖက်ခန်းသို့ တစ်ချက်ချောင်း ကြည့်လိုက်ပြီးမှ ခရမ်းသီးများရှိရာအနီးသို့ လျှောက်လာပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချလိုက်ကာ အရှည်တစ်ထွာကျော်ကျော် လောက်နှင့် လုံးပတ်တစ်ကျပ်ခွဲလုံးလောက်ရှိသော ခရမ်းသီးတစ်လုံးကို ကောက်ကိုင်လိုက်ပြီး နောက်မှနံရံသို့ ကျောမှီ၍ ခပ် လျှောလျှောလေးထိုင်ကာ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ထောင်၍ကားလိုက်ပြီး ထဘီလေးကို လှန်တင်လိုက်ပြန်သည်။ ပြီးတော့ အမွှေး လေးတွေ ခပ်စိပ်စိပ်ပေါက်နေသော စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ဖဝါးဖြင့် သုံးလေးခါလောက် ပွတ်တိုက်ပြီးမှ စောက်ဖုတ်နှုတ် ခမ်းသားနှစ်ဖက်ကို အသာဖြဲ၍ ခရမ်းသီးကို တေ့လိုက်သည်။ “ အင်….ဟင့်….ဟင့်….” ခရမ်းသီးထိပ်နှင့် စောက်စေ့လေးကို ထိုးမွှေရင်း သွယ်သွယ် တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်တုန်သွားသည်။ ပြီးတော့မှ မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ ခရမ်းသီးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဖြေးဖြေးနှဲ့၍ သွင်းယူရင်း သွယ်သွယ်၏ ပါးစပ်လေးက ဟ၍ ဟ၍ လာ သည်။ သွယ်သွယ်လက်ထဲမှ ခရမ်းသီးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ ဝင်နိုင်သလောက်ဝင်အောင် သွင်းသည်။ “ ကျွတ်….ကျွတ်….ကျွတ်….အဟင်း….ဟင်း….” သားအိမ်ဝသို့ ခရမ်းသီးထိပ်နှင့်ထိ၍ ကျင်ကနဲ ဖြစ်သွားတော့မှ အသွင်းရပ်လိုက်သည်။
တထွာသာသာရှိသော ခရမ်း သီးက အပြင်ဖက်တွင် လက်သုံးလုံးခန့်သာ ကျန်တော့သည်။ ခရမ်းသီးကို စောက်ခေါင်းထဲမှ တဝက်လောက် ပြန်ထုတ်လိုက် နှင့် လုပ်သည်။ ခရမ်းသီးကို ရိုးရိုးသွင်းတာထုတ်တာမဟုတ်ဘဲ လက်ဖြင့်ကိုင်ထားရင်းက ခရမ်းသီးကို လှည့်၍ လှည့်၍ စောက်ခေါင်းထဲတွင် မွှေမွှေပြီး သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်နေတာဖြစ်သည်။ ဒီအချိန်တွင် သွယ်သွယ်အား တွေ့မြင်ရသူ မည်သူမဆို သွယ်သွယ်မှာ တဏှာကြီးကြောင်း ကောက်ချက်ချမည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်လေသည်။ အင်း…အင်း….ဟင်း….ဟင်း…..” အရည်တွေက ရွှဲသထက်ရွှဲရွှဲပြီး ထွက်လာသလို သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်နေသော ခရမ်းသီးကြီးကလည်း အဝင် အထွက် သွက်လက်လျင်မြန်၍လာသည်။အင်း….ဟင်း….ဟင်း…အင်း…..အင်း….ကျွတ်….ကျွတ်….” သွယ်သွယ်မှာ အားမလိုအားမရဖြင့် လျှာလေးကိုထုတ်၍ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို ယက်လိုက်ပြီး ခရမ်းသီးကို သွက် သွက်ကြီး အထုတ်အသွင်းလုပ်နေသည်။ ခဏမျှအကြာတွင်တော့ သွယ်သွယ်မှာ မေးကြောလေးတွေ ထောင်ထလာအောင် အံကိုကြိတ်လိုက်ပြီး ခရမ်းသီးကို လက်ဖြင့်အသေအချာဆုပ်ကိုင်၍ ခပ်ပြင်းပြင်းလေးငါးချက်လောက် စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုး စိုက်ကာ….အ…အင်း….အီး….” ဟူသော မသဲမကွဲညီးသံလေးနှင့်အတူ တစ်ကိုယ်လုံး ပျော့ကျသွားလေတော့သည်။ “ လူပျိုကြီး….ခုမှအိပ်ယာထလာသလား….” အသံကြားရုံနှင့် မသန်းရီမှန်း ဖေတင် သိလိုက်သည်။ လက်တစ်ဖက်က သွားပွတ်တံကိုင်ရင်း အိမ်ရှေ့ရေစည်ဘေး သို့ မျက်နှာသစ်ရန်ဆင်းလာသော ဖေတင် ခေါင်းရင်းအိမ်ဖက်သို့ လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ “ ဟုတ်တယ် မသန်းရီရေ….အလုပ်ပိတ်ရက်မို့ နေမြင့်အောင် အိပ်လိုက်တာ….ဟဲ….ဟဲ….” မသန်းရီစကားရှည်တတ်မှန်းသိ၍ မပြောချင်ဘဲနှင့် ဖေတင် သေသေချာချာ ရှင်းပြလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဖေတင်က သူမကိုလည်း စူးစူးရဲရဲကြည့်လိုက်မိသည်။ ကလေးတစ်ယောက်အမေ အသက်(၃၅)နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်သော မသန်းရီက ပါတိတ်တပတ်နွမ်းဝမ်းဆက်လေးနှင့် လှချင်တိုင်းလှနေသည်။ လုံးကြီးပေါက်လှလို့ဆိုရလောက်အောင် ခန္ဓာကိုယ်က တလုံး တခဲကြီးမဟုတ်သော်လည်း စွဲမက်စရာကောင်းလောက်အောင်တော့ အချိုးကျ ဖွံ့ထွားလုံးတစ်စွင့်ကား၍နေသည်။
သူ့ကို ဖေတင် စူးစူးရဲရဲကြည့်နေမှန်းသိ၍ မသန်းရီ မျက်နှာရဲသွားသည်။ “ သိပါဘူးတော်….လူပျိုကြီးတွေ ညဖက်ဘာတွေ အလုပ်ရှုပ်နေမှန်းမှ မသိတာ….ဟင်း….ဟင်း….” “ သန်းရီကလည်းဟာ စောစောစီးစီး လုပ်ပြီ….” ဖေတင် သူမထံမှ အကြည့်ကိုလွှဲလိုက်ပြီး ရေစည်ပေါ်မှ ရေဖလားကို လှမ်း၍ကိုင်လိုက်သည်။ “ အမသန်းရီကလည်း ကျမဦးလေးက ရိုးပါတယ်….အဲ့လိုမပြောပါနဲ့….ဟင်း…ဟင်း….” အဲ လာပြန်ပြီတစ်ယောက်။ ဖေတင် ခြေရင်းအိမ်ဖက်သို့ လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ တီရှပ်အဖြူရောင်လေးနှင့် ထဘီအနက် လေးနှင့် ရယ်ကြဲကြဲလုပ်ကာ ရပ်နေသော သွယ်သွယ်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “ အေး….ဟုတ်သားပဲဟာ….ညီးပဲ သန်းရီကို ကြည့်ပြောပါတော့.. မိသွယ်….ညီးဘာသိလို့လဲ….ဒီလူပျိုကြီးအကြောင်းကို နောက်မှငါပြောပြမယ်….လာ….သွားကြမယ်.. အမ…ဈေးခြင်းတောင်းမပါဘူးလား…. ညီးကရော…ဟင်း….ဟင်း…အမ ခြင်းတောင်းထဲ ကပ်ထည့်မလို့ ဝက်သားတစ်မျိုးထဲဝယ်မှာ… ကောင်မလေးနော်….အချောင်တော်တော်လိုက်….ဟင်း….ဟင်း….ညီးလည်း မလွယ်ဘူး….လာပါ အမရာ….ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ဝယ်ပြီး ထည့်ကြတာပေါ့….” သူတို့နှစ်ယောက် လမ်းမပေါ်ရောက်သွားကြလျှင် ဖေတင်က မသိမသာခိုး၍ကြည့်လိုက်သည်။ သွယ်သွယ်ရဲ့ အလုံး အထည်ကလည်း မသေးလှပါလား။ သန်းရီလောက်ကို ရှိနေသည်။ ဖေတင်၏ အတွေးက မဆုံးသေး။ သူ့ထံသို့ သမင်လည် ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်သော မသန်းရီ၏ မျက်လုံးများနှင့် ဆုံမိလိုက်သည်။ ဖေတင် သူမတို့ကို ခိုးကြည့်နေတာတွေ့တော့ မသန်းရီ မျက်နှာပြုံးဖြီးဖြီးဖြစ်ပြီး ပြန်လှည့်သွားသည်။ မသန်းရီ ယောက်ျားအောင်ချစ်က သင်္ဘောကျင်းတွင် အလုပ်လုပ်သည်။ သူတို့တွင် သမီးတစ်ယောက်ရှိပြီး ဒီနှစ် ဆယ်တန်းဖြေရမည်ဖြစ်သည်။ သားသမီးမရှိသော အောင်ချစ်၏ အမက အကုန်အကျခံကာ ဘော်ဒါထားပေးထားသည်။ အောင်ချစ် အလုပ်က တစ်ပတ်မှ နှစ်ရက်ခန့်သာ အိမ်ပြန်နားရသည်။ တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေသော မသန်းရီမှာ မိန်းမချင်း အဖော်များနှင့် သူမ၏အိမ်တွင် တရုံးရုံးဖြစ်လျက်ရှိသည်။ မသန်းရီတို့ ဒီအိမ်တွင်နေလာတာ သူတို့၏ သမီးလေးတစ်သက်ပင် ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တော့ ဖေတင်နှင့်က ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေလို ပြောမနာဆိုမနာဖြစ်နေသည်။
သွယ်သွယ်ဆိုသော ကောင်မလေးကတော့ နှပ်ချေးတွဲလောင်းကတည်းက ဖေတင်တို့ ထိန်းလာတာဖြစ်သည်။ ဖေတင့် အမေ ဒေါ်အေးရှိတုန်းကဆိုလျှင် သွယ်သွယ်က ဒေါ်အေး၏ လက်ကတုံးတောင်မွှေး။ အိမ်မှာလာပြီး စားလိုက်၊ အိပ်လိုက် လုပ်နေရုံမက ဒေါ်အေးဘယ်သွားသွား အဖော်အဖြစ် သွယ်သွယ်ကပါတတ်သည်။ အခု ဖေတင့်အမေ ဒေါ်အေးဆုံးသွားတာ ခြောက်နှစ်ကျော်ပြီ။ သွယ်သွယ်ပင်လျှင် အပျိုကြီးဖားဖားဖြစ်၍ အိမ်ထောင်ပင်ကျသွားပြီဖြစ်သည်။ ဖေတင်တို့က သားအမိ နှစ်ယောက်ထဲနေတာဖြစ်သည်။ အခု မိခင်ဖြစ်သူက မရှိတော့သည့်အခါ ဖေတင်တစ်ယောက်ထဲ နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်လေသည်။ ဖေတင် အလုပ်က ဝပ်ရှော့ဆရာဖြစ်သည်။ အလုပ်ဆင်းသည့်ရက်တွင် သူဌေးက ထမင်းကျွေးသည်။ အလုပ်ပိတ်ရက်ဆိုလျှင် လမ်းထိပ်က ထမင်းဆိုင်မှာ စားသည်။ ဒါက တစ်ခါတစ်ရံမျိုးမှသာ စားဖြစ်တာဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် ခေါင်းရင်းအိမ်မှ မသန်းရီနှင့် ခြေရင်းအိမ်မှ နွယ်နွယ်နှင့် သွယ်သွယ်တို့ အိမ်မှလည်း အလုပ်ပိတ်ရက်ဆိုလျှင် ထမင်းဟင်းများ သူ့တစ်ယောက် စာ လာပို့တတ်သည်။ ဆယ်လေးငါးနှစ်အတူတူနေလာကြတာဆိုတော့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုက ဆွေမျိုးတွေလို ဖြစ်နေကြလေ သည်။ ဖေတင် အိမ်ပေါ်သို့ပြန်ရောက်၍ မျက်နှာသုတ်ပြီး ဘေးပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်လိုက်တော့ သွယ်သွယ်တို့ အိမ်ကို တွေ့ လိုက်ရသည်။ ဖေတင် မသန်းရီပြောသွားသော “ ညက ဘာတွေအလုပ်ရှုပ်နေမှန်းမှ မသိတာ…” ဆိုသော စကားကို အမှတ် ရလိုက်သည်။ သူတို့အိမ်တွေက (၁၀)ပေအိမ်လေးတွေဖြစ်ပြီး တစ်အိမ်နှင့်တစ်အိမ်က သုံးပေမျှသာ ကွာခြား၍ ညလူခြေ တိတ်ချိန်တွင် တစ်ဖက်မှ ကိုစိုးနှင့် နွယ်နွယ်တို့ ကဲကြသည့်အသံတွေက အတိုင်းသားကြားနေရသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် ဖေတင် မနေနိုင်။ အိမ်နှစ်လုံးကြားသို့ဝင်၍ ချောင်းတတ်သည်။ ဝါးထရံကာအိမ်ဆိုတော့ ဖေတင်အဖို့ အခွေကြည့်ရသည် ထက်ပိုပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိလှသည်။ ညတုန်းကတော့ ဖေတင် ကံဇာတာ တက်လာသည်။ နွယ်နွယ်တို့ လင်မယား ကာမစပ်ယှက်နေတာတင်မက သွယ်သွယ်တစ်ယောက် စိတ်တွေထပြီး ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေပုံကိုပါ တွေ့မြင်ခဲ့ရလေသည်။ အိမ်နှင့် (၇)ဈေး မိန်းမခြေလှမ်း (၁၅) မိနစ်ခန့်သာ လျှောက်ရသည်။
မသန်းရီနှင့် သွယ်သွယ်တို့ ကားမစီးတော့ဘဲ ခပ်ဖြေးဖြေးပဲ လျှောက်လာကြသည်။ “ အမသန်းရီ…..ဦးလေး ဖေတင်အကြောင်း ပြောမလို့ဆို… အော် အေး… ပြောလေအမ… ညီးကလည်းအေ…လောလိုက်တာ….ဘယ်ကစပြောရမလဲလို့ စဉ်းစားနေတာ….အင်း….ဒီလိုအေ့…အကိုဖေတင် က လူပျိုကြီးဆိုတော့ မိန်းမမရှိဘူး…. ဟွန်း….ဒါများ အဆန်းလုပ်လို့…. နားထောင်စမ်းပါအုံးအေ….ညီးကလဲ… ဆက်ပြောလေ….နားထောင်နေတယ်…. ဟိုတစ်နေ့က သူအလုပ်ကပြန်လာပြီး ခဏနေတော့ ဒိုဘီကလာပို့ထားတဲ့ သူ့အဝတ်တွေ ငါသွားပို့တယ်….အဲဒါ သူဘာလုပ်နေတယ်မှတ်လဲ…ဘယ်သိမှာလဲ… နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ပိုစတာကြီးကိုချိတ်ပြီး အဲဒီရှေ့မှာရပ်ပြီး ဂွင်းထုနေတယ်… အယ်….သူကလည်း မနေနိုင် ဝယ်စားလိုက်ရင်ရတာပဲဟာ…မိန်းမမရှိတော့ သနားစရာပေါ့ဟာ…. ဟီ…ဟိ….အမကလည်း ပါးစပ်က သနားနေတယ်….ထဘီချွတ်ပြီး ဝင်သွားလိုက်ရင်ပြီးရော…. သေနာမလေး….လင်ရမှ ပါးစပ်က ကြမ်းလာတယ်….ညီးသာဝင်သွား…. ကျမကတော့ ဒါမျိုးမကြုံသေးပါဘူး… နေပါအုံးအေ….ငါ့စကား ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး….ငါပြောချင်တာက အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး….ငါတွေ့လိုက်ရတဲ့ သူ့ပစ္စည်းကြီး….” “ ပြောစမ်း….ပြောစမ်း….အမ ဘယ်လိုဟာကြီးလဲ….” ပြာပြာသလဲမေးလိုက်သော သွယ်သွယ်အား မသန်းရီက လှည့်၍မျက်စောင်းထိုးလိုက်သည်။ “ ပြောမှာပေါ့အေ…..ညီးကလဲဖြစ်နေလိုက်တာ….သူ့ဟာကြီးက သစ်သားငြုပ်ကျည်ပွေ့ကြီးလား မှတ်ရတယ်အေ…. နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး….ငါဖြင့် အဲဒါကြီး မြင်လိုက်ရပြီး (၂)ရက်လောက် အိပ်မပျော်ဘူး….” “ ဟိဟိ….အမကလည်း ဖြစ်ရတယ်…..ဟိဟိ….” “ ဟဲ့ မသန်းရီတို့ ဒီမှာ ငါးကြင်းခုတ်သားတွေရှိတယ်နော်….” ဈေးဝရောက်၍ ဈေးသည်တစ်ယောက်က ဆီးကြိုအော်ပြောလိုက်သံကြောင့် သူမတို့နှစ်ယောက် စကားစပြတ်သွား ကြလေသည်။ ဟင်းပန်းကန်လေးကိုင်၍ သွယ်သွယ် သူမ၏ အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်ကို ဖေတင် တွေ့လိုက်သည်။ သူ့ဆီသို့ သွယ်သွယ်လာတော့မည်။ အပေါ်က ဝတ်ထားသော တီရှပ်အဖြူလေးက ဈေးသွားတုန်းက တီရှပ်လေးဖြစ်ပေမယ့် အထဲက ဘော်လီကိုတော့ ချွတ်ထားပုံရသည်။
အိမ်ပေါ်မှအဆင်း နို့နှစ်လုံးက ဗရမ်းဗတာခါရမ်းသွားသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ အောက်ဖက်ကဝတ်ထားတာတော့ ဈေးသွားတုန်းက ထဘီအနက်လေးမဟုတ်ဘဲ အရောင်လွင့်ပျယ်စပွင့်ရိုက်ထဘီ အနီ ရောင်လေးကို ဝတ်ထားသည်။ ဖေတင် မသန်းရီကိုတော့ တိုက်စစ်ဆင်ပြီးပြီ။ သွယ်သွယ်ကိုလည်း တိုက်စစ်ဆင်ရဦးမည်။ ဖေတင် ငေါက်ကနဲထ၍ အတွင်းခန်းဖက်သို့ ဝင်လာလိုက်သည်။ ပြီးလျှင် အခန်းထဲတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ဝတ်လစ်စလစ်ပုံရှေ့တွင် ရပ်လိုက်ပြီး သူ့ ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်သည်။ ဖေတင်က ညကသွယ်သွယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး နောက် သွယ်သွယ်ကို အတော်လိုးချင်နေတာဖြစ်သည်။ သွယ်သွယ်ကို အခုတွေ့လိုက်ရတော့ သူ့လီးကြီးက ထောင်းကနဲ ထောင်းကနဲ ထ၍လာသည်။ ပုဆိုးချွတ်ချလိုက်ပြီးသည်နှင့် ဖေတင်က အိမ်ရှေ့ခန်းနှင့် အတွင်းခန်း ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ဖက်ကို တစောင်းပေး၍ သူ့လီးကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ သွယ်သွယ်အိမ်ပေါ်သို့ လှမ်းတက်လိုက်တော့ ကိုဖေတင်ကို မတွေ့ရ။ အသံပြုမည်ကြံလိုက်ပြီးတော့မှ မနက်က မသန်းရီပြောသွားသည်ကို သတိရလိုက်ပြီး လက်ထဲက ဝက်သားဟင်းပန်းကန်လေးကို အိမ်ရှေ့စားပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီး ခြေသံမကြားအောင် အတွင်းသို့ဝင်သည့်အပေါက်နားကပ်၍လာပြီး အထဲသို့ ကြည့်လိုက်သည်။ “ အာ….ဟာ….” အမသန်းရီပြောသည့်အတိုင်းပင်။ ဦးလေးဖေတင်၏ ပစ္စည်းကြီးက ငြုပ်ကျည်ပွေ့ကြီးလား အောက်မေ့ရသည်။ ဦးလေးဖေတင်က သူ့ရှေ့က ဝတ်လစ်စလစ်ပုံကိုကြည့်ကာ သူ့လီးကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ပြီး တစ်ချက်ခြင်း ဂွင်း တိုက်နေသည်။ လီးကြီးသာ ဧရာမဖြစ်တာမဟုတ်။ အောက်က ဂွေးအုမဲမဲကြီးတွေကလည်း ဖောင်းတင်းလုံးတစ်ပြီး နဲတာကြီး မဟုတ်။ ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးချွတ်ချထားသဖြင့် သူ၏ တုတ်ခိုင်တောင့်တင်းလှသော ပေါင်တံကြီးတွေကလည်း ကြွက်သားအ မြောင်းမြောင်းထ၍ နေသည်။ သွယ်သွယ်၏စိတ်တွေ ထိန်းမရအောင်ထ၍လာသည်။ သွယ်သွယ် မျက်စေ့ကိုမှိတ်ကာ အခန်း တံခါးကိုမှီပြီး ထဘီကိုမ၍ လက်လျှိုသွင်းပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို ဖွဖွလေးပွတ်၍ပေးနေမိသည်။ သူမ၏ ရင်တစ်ခုလုံး ဘလောင်ဆူစေကာ ရာဂစိတ်များ ထကြွလောင်မြိုက်လာသည်။ အလိုးခံချင်စိတ်တွေကလည်း ထိန်းမရအောင် ထ၍လာသည်။ ဖေတင် ပြုံးလိုက်သည်။ သွယ်သွယ်က မသန်းရီထက်ပိုပြီး ထန်သည်။ မသန်းရီတုန်းက ဒီလိုမျိုးမဟုတ် သူလုပ်ပြတာကို တဝကြည့်ပြီး တုန်တုန်ယင်ယင်ဆင်းပြန်ပြေးသွားသည်။ အခုတော့ သွယ်သွယ်က သူ့ကိုပင် ဂရုမထားတော့လောက်အောင် စိတ်တွေထနေပြီ။ သွယ်သွယ်၏ ပါးပြင်လေး နွေးကနဲတစ်ချက် ခံစားလိုက်ရသည်။ “ ဟင်….ဦးလေး….” “ လာ….ကုတင်ပေါ်ကို….” “ ဟင့်အင်း….” “ လာပါဆို…..အချိန်ကြာတယ်…..ခရမ်းသီးထက် ပိုကောင်းတယ်ဟ….သိလား…..” သွယ်သွယ် ရှက်စိတ်တွေက ရာဂစိတ်နှင့်အပြိုင်ဖြာသွားသည်။ သွယ်သွယ်ငိုင်၍အသွား ဖေတင်က သူမကို ပွေ့၍ ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်သည်။ ဖေတင်၏ လီးကြီးက တရမ်းရမ်းဖြစ်နေသည်။
သွယ်သွယ် မျက်လုံးစုံမှိတ်ထားလိုက်သည်။ ဖေတင်က သူမ၏ ထဘီကိုလျင်မြန်စွာ ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ရိတ်ထားပုံရပြီး ပြန်ပေါက်ကာစ အမွှေးငုတ်တိုလေးများဖြင့် စောက်ဖုတ်အထက်ဆီးခုံဝင်းဝင်းလေးကို လီးထိပ်လုံးလုံးကြီးဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်။ “ အ….အ….” သွယ်သွယ် တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲဖြစ်သွားသည်။ အကွဲကြောင်းလေးကြားသို့ လီးထိပ်ကို ခပ်ဖိဖိလေးစိုက်ပြီး အထက် အောက်စုံချီဆန်ချီ ဆွဲပေးလိုက်သည်။ သွယ်သွယ်၏ ပေါင်နှစ်လုံး ကားခနဲဖြစ်သွားသည်။ လီးတန်ကြီးကို ခါးလည်မှကိုင်ပြီး စောက်ပတ်အောက်ဖက်နားရှိ အလိုးခံသည့်အပေါက်သို့ နှစ်သွင်းဖိချလိုက်သည်။ သွယ်သွယ်ထံမှ ‘ အူး ’ ကနဲ အသံတစ် ချက်ထွက်လာပြီး ကော့တက်သွားသည်။ ဖေတင်က သွယ်သွယ်၏ တီရှပ်လေးကို အပေါ်သို့လှန်တင်လိုက်သည်။ ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲ ကျစ်လစ်မာတင်းသော နို့ကြီးနှစ်လုံး ထွက်ပြူ၍လာသည်။ ဖြူဝင်းသောနို့အုံကြီးများတွင် အကြောစိမ်းကြီးများက ယှက်သန်းနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို စုံကိုင်ကာ ဖွဖွချေပေးရင်း မသိမသာလေးဆွဲကာ လီးကို ဖြေးဖြေးချင်းစိုက်ချလိုက်သည်။ “ အိ….အိ….အ…..အ…..အီး…..” လီးတန်ကြီးက အရင်းထိဝင်သွားကာ ဂွေးအုကြီးများက သွယ်သွယ်၏ ဖင်ဝကို ဖိကပ်မိနေသည်။ အမွှေးကြမ်းကြီး များ၏ ယားကျိကျိအထိအတွေ့နှင့် စောက်ခေါင်းထဲသို့ ဇိကနဲစိုက်ဆင်းလာသော လီးတန်ကြီး၏ အတွေ့အရသာများကြောင့် သွယ်သွယ် လောကကြီးကို မေ့သွားကာ မျက်တောင်များစင်းပြီး တဟင်းဟင်းဖြစ်လာသည်။ ဖေတင် သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ စွပ် ကျယ်ချိုင်းပြတ်ကို ခေါင်းမှဆွဲ၍ချွတ်လိုက်သည်။ ဖေတင် ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားပြီ။ ထို့နောက် လီးကို တဆုံးသွင်းကာ ဖိကပ် စိမ်ထားပြီး နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ငုံ့၍စို့သည်။ “ ဟင်း….ဟင်း….ဟင်း…..အင်း….လုပ်…..လုပ်တော့လေ…..” စောက်ခေါင်းထဲက လီးက ခဏကြာအောင် ငြိမ်နေတော့ သွယ်သွယ် မနေတတ်တော့။ အဖျားတက်သလို တဟင်း ဟင်းဖြစ်လာပြီး ဖေတင်၏ လက်မောင်းအိုးကြီးတစ်ဖက်ကို ထုရိုက်ရင်းအထဲမှ မဆန့်မပြဲဝင်နေသော လီးကြီးကိုလည်း စောက်ဖုတ်နှင့် ညှစ်၍ပြောသည်။ ဖေတင်ကိုယ်ကိုကြွကာ လီးကို လျှောကနဲဆွဲ၍ ထုတ်လိုက်သည်။ “ ပြွတ်….ဖွတ်…အင်း….ဟင်း….” ဖေတင် လီးကို ပြန်၍ဆောင့်အချ သွယ်သွယ်က မစောင့်နိုင်တော့ဘဲ သူမ၏ ဖင်ကြီးကို တစ်ထွာလောက်မြင့်အောင် ကော့ပင့်ဆောင့်၍ လီးကြီးကို ပြန်၍သွင်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ ကျေနပ်သွားပုံဖြင့် ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချလိုက်သည်။ ငယ်ငယ်ချောချောလှလှ သိပ်ထန်သောကောင်မလေးကို ချနေရပြီမို့ ဖေတင် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်၍နေသည်။
“ သွယ်သွယ်….အပေါ်ကနေပြီး စိတ်ကြိုက်ဆောင့်ပါလား….” “ အင်း….လုပ်မယ်….ဆင်း….ဆင်း….ဦးလေး….မြန်မြန်ဆင်း…..” သွယ်သွယ် ရာဂစိတ်တွေ ပေါက်ကွဲနေပြီး အငမ်းမရပြောပြီး ပက်လက်ဖြစ်သွားသော ဖေတင်၏ အပေါ်သို့ ခွတက် ကာ ဧရာမလီးကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်လိုက်ပြီး အားရပါးရဖိဆောင့်ချလိုက်သည်။အား…အ….အား…..” မိန်းမကြမ်းတော့ ယောက်ျားမခံနိုင်ဖြစ်ရသည်။ လီးကြီးအပေါ်ယံအရေပြားကို စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများဖြင့် ဖိညှပ်ကာ အားရပါးရဖိဆောင့်ချလိုက်သည့်အတွက် စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးတဆုံးဝင်သွားသည့်အချိန်တွင် အရေပြားကို လီး အရင်းထိဖိဆွဲဆောင့်ချလိုက်သလိုဖြစ်သွားသည့်အတွက် ကျင်ကနဲ နာသွားပြီး ဖေတင် မျက်နှာကြီးမဲ့သွားကာ ‘ အား ’ကနဲ အသံထွက်သွားသည်။ လီးတဆုံးဝင်သွားပြီးနောက် သွယ်သွယ်က ဆီးခုံခြင်းပွတ်လှည့်ပေးကာ ဒူးထောက်ချလိုက်ပြီး ဖေတင်၏ ရင်အုပ်ကြီးပေါ်သို့ သူမ၏လက်လေးများထောက်လိုက်ပြီး ရှုံ့မဲ့မဲ့ဖြစ်နေသော ဖေတင်၏ မျက်နှာကို အငမ်းမရငုံ့၍နမ်းသည်။ ပြီးတော့မှ သူမက ဖင်ကိုကြွကြွပြီး တစ်ချက်ခြင်း ဆောင့်ဆောင့်လိုးသည်။အင်း….ကောင်းလားဟင်….ဦးလေး….” “ အင်း….သွယ်သွယ့်ဟာလေးက ကြပ်ညှပ်နေတာပဲ….သိပ်ကောင်းတာပဲ….ဒါဆို ဦးလေးကြိုက်ရင် ကျမတို့ နေ့တိုင်း လုပ်ကြမယ်နော်….” “ ရွှတ်…. အဆောင့်မပျက်ပြောရင်း သွယ်သွယ်က ဖေတင်ကို ငုံ့နမ်းပြန်သည်။ ထိုအချိန်တွင် သူတို့ရှိရာအတွင်းခန်းထဲသို့ ဝင်လာသူကတော့ မသန်းရီပင်ဖြစ်ပါသည်။ မသန်းရီမှာ ဖေတင်အတွက် ထမင်းနှင့်ဟင်းလာပို့ရင်း ဖေတင်နှင့် သွယ်သွယ်တို့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြသည်ကို မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။
မသန်းရီ အပေါက်ဝမှ ရပ်၍သူတို့နှစ်ယောက်ကို ခဏရပ်ကြည့်သည်။ ဟိုတစ်နေ့ကတည်းက မသန်းရီမှာ ဖေတင်၏ ပစ္စည်းကြီးကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေရသည့်အထဲ ဖေတင်နှင့် သွယ်သွယ်တို့ သဲသဲမဲမဲကာမစပ်ယှက်နေကြပုံ ကို ရပ်ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုမှ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သူတို့ရှိရာ အတွင်းခန်းထဲသို့ မသန်းရီ ဝင်လာခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ “ သွယ်သွယ်….” “ ဟင်….ဟာ….” သွယ်သွယ်က လီးကိုဆွဲချွတ်ပြီး ဖေတင်၏ အပေါ်မှလှိမ့်ဆင်းလိုက်သလို ဖေတင်ကလည်း ငေါက်ကနဲ ထထိုင်လိုက် သည်။ မသန်းရီမှာ အသိဉာဏ်မဲ့သော စက်ရုပ်တစ်ရုပ်သဖွယ်ဖြစ်နေသည်။ သူမပါးစပ်မှ သွယ်သွယ်ဟုခေါ်လိုက်ပြီး သူမ၏ ခါးမှထဘီကို မသန်းရီက ချွတ်ချလိုက်သည်။ အံ့အားသင့်နေသော ဖေတင်က ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပြီး မသန်းရီကို ခုတင်ပေါ်သို့ဆွဲထိုင်ပေးလိုက်ပြီး သူမ၏ အင်္ကျီတွေကို အမြန်ချွတ်ပစ်လိုက်ရာ အလုံးလိုက်အခဲလိုက်နို့အုံကြီးတွေ ထွက်ပေါ် ၍လာသည်။ ဖေတင်၏ လက်တစ်ဖက်က မသန်းရီ၏ အမွှေကြမ်းကြမ်းနှင့် စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပွတ်သပ်ပေးရင်း နို့ကြီးနှစ်လုံး ကို တပြွတ်ပြွတ်စို့၍ပေးလိုက်ရာ မသန်းရီ၏ လက်နှစ်ဖက်က ဖေတင်၏ခေါင်းကြီးကို ဖွဖွလေးဖက်ထားလိုက်လေသည်။ ဖေတင်နှင့် မသန်းရီတို့ မိမိရှေ့၌ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်နေပုံကိုမြင်ရသော သွယ်သွယ်က နဂိုကလည်း ခပ်ထန်ထန်ဆိုတော့ မနေနိုင်တော့ဘဲ ဖေတင်၏ ဘေးသို့ ပြေးကပ်ကာ ဖေတင်၏ လီးကြီးကို ပထမဂွင်းတိုက်ပေးသည်။ နောက်လီးပေါ်မှ အရည် ခွံကို ဆွဲချ၍ ဒစ်ကြီးကိုဖော်လိုက်ပြီး ဒစ်ကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့် ကုန်း၍ငုံကာ လျှာဖြင့် ကလိပေးလိုက်ရာ ဖေတင်မှာ ဖင်ကြီးခါယမ်းသွားသည်။ “ လာ….သန်းရီ…လှဲလိုက်….” မသန်းရီကလည်း တုန့်ဆိုင်း၍မနေတော့ဘဲ ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်လျှင် ဖေတင်က ကဗျာကယာတက်ခွပြီး စောက်ပတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးအဝသို့ လီးကိုတေ့၍ လိုးသွင်းလိုက်သည်။ “ အေ့….အား….ကျွတ်….ကျွတ်…..ဟင်း….နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး…..” မသန်းရီ ဒီလီးကြီးကို လေးငါးရက်ကြာအောင် စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ရသည် မဟုတ်ပါလား။ ထိုအချိန်တွင် သွယ်သွယ်က ဖေတင်ရှေ့ မသန်းရီ၏ မျက်နှာပေါ်တွင်ခွ၍ လေးဘက်ကုန်းလိုက်သည်။ မသန်းရီက ဖေတင်လိုးတာကိုခံရင်း သွယ်သွယ်၏ စောက်ပတ်ကြီးကို ယက်ပေးသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် စောက်စေ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်လေးကို စုပ်၍ပေးသည်။ တအင်း အင်း တအအ အသံများသည် သုံးယောက်စလုံးထံမှ ပူလောင်ပြင်းပြစွာ ပေါ်ထွက်၍နေသည်။
အား….ဟား….ကျွတ်…..ကျွတ်…..” မသန်းရီ၏ စောက်ပတ်ကြီးမှာ အရည်ကြည်များ စိုရွှဲ၍ ပြဲလန်ဖောင်းကား၍လာသလို သွယ်သွယ်၏ စောက်ပတ်ကြီး မှာလည်း မသန်းရီ၏ တံတွေးများဖြင့် စိုစွတ်ပြောင်လက်၍ လာသည်။ မသန်းရီမှာ ကြီးမားသောလီးကြီးနှင့် ဖေတင်က ကျွမ်း ကျင်စွာလိုးနေသည့်အရသာကို မက်မက်မင်မင်ကြီးခံစားနေရကာ သွယ်သွယ်၏ စောက်ပတ်ကိုယက်ပေးရင်း သူမ၏မျက်လုံး များက တစ်ချက်တစ်ချက် စင်း၍ကျသွားသည်။ အဝတ်ကင်းမဲ့သော ကာမသားကောင်သုံးဦးစလုံးမှာ မှောင်မိုက်သော ကာမ နွံအတွင်းသို့ အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ နစ်ဆင်းလျက်ရှိလေသည်။ အ…ထွက်….ထွက်တော့မယ်…..လုပ်….လုပ်….လုပ်စမ်းပါ….အား….အ….အီး….အား.. ….အ….” မသန်းရီမှာ သွယ်သွယ်၏ စောက်ပတ်ကို ပါးစပ်မှလွှတ်ပေးရင်း ပရမ်းပတာပြောသည်။ “ သွယ်သွယ့် ဖင်ကြီး ဦးလေး ရှေ့ကပ်လိုက်….” သွယ်သွယ်က လေးဖက်ထောက်လျက်က သူမဖင်ကြီးကို ဖေတင်ရှေ့သို့ တိုးလိုက်ရာ ဖေတင်က သူ့လက်ညှိုးကို သွယ်သွယ်၏ စောက်ပတ်ထဲထိုးသွင်း၍ ခပ်ကြမ်းကြမ်းမွှေပေးသည်။ ဖေတင်မှာ တစ်ဖက်မှလည်း မသန်းရီကို ပယ်ပယ်နယ် နယ်ကြီး လိုးဆောင့်နေသည်။အား….အီး….အား….ထွက်…..ထွက်ကုန်ပြီ…..အား….အ….ကျွတ်….ကျွတ်…..” မသန်းရီမှာ မျက်စိနှစ်လုံးစုံမှိတ်ကာ ရှုံ့ရှုံ့မဲ့မဲ့ကြီးပြောရင်း သူမ၏ ခါးမှာ ကော့ကော့တက်သွားလေသည်။ မသန်းရီ ငြိမ်သွားတော့မှ ဖေတင်က သူ၏ မပြီးသေးသောလီးကို သွယ်သွယ်၏ စောက်ခေါင်းထဲ ဗြစ်ကနဲ ထိုးထည့်လိုက်သည်။ “ လုပ်….ဦး….လုပ်….လုပ်…..နို့တွေလည်း ဆွဲပေး…..” လေးဖက်ကုန်းထားသော သွယ်သွယ်၏ နို့နှစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲပြီး ဖေတင်က ပယ်ပယ်နယ်နယ် လိုးသည်။ သွယ်သွယ် မှာ ရင်ထဲတွင် တဖျတ်ဖျတ်တလှပ်လှပ် ခံစားရင်း သူမ၏ ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ပစ်ပစ် ဆောင့်ပေးသည်။
“ ဆောင့်….ဆောင့်….နာနာလေး ဖိဆောင့်…ဦး….” သွယ်သွယ်မှာ မျက်လုံးနှစ်လုံးကိုစုံမှိတ်ပြီး တဟင်းဟင်း မာန်ထလျက် အားရပါးရ အလိုးခံနေသည်။လုပ်….လုပ်….ထွက်တော့မယ်….ဦး….အား…ဟ….အ….ထွက်….ထွက်…ပြီ…အား….အီး….အား….အား….” သွယ်သွယ်မှာ ဂယောင်ဂတမ်း ဆက်တိုက်ပြောရင်း သူမ၏ ဦးခေါင်းလေး ဘယ်ညာခါရမ်းရင်း စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရည်များ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။ ဖေတင် ကိုယ်တိုင်မှာလည်း လီးကြီးမှာ ကျင်တက်လာပြီး တောင့်တင်းလျက် ပြီးချင်လာကာ ပြီးသွားပြီဖြစ်သော သွယ်သွယ်၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ သူ့လီးကြီးကို အရည်တမျှားမျှားဖြင့် ဆွဲထုတ်ပြီး ပက်လက်အနေအထားပင်ရှိနေသေးသော မသန်းရီ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုးထည့်ကာ ဒလကြမ်း ဆောင့်လိုးရင်း လရည်များကို ပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည်…. ပြီးပါပြီ။